URose McIver we 'iZombie' Uxoxa ngeFvourite yakhe ayithandayo yeBrains, iiNtetho zeXesha le2 | - Itv
Eyona Itv URose McIver we 'iZombie' Uxoxa ngeFvourite yakhe ayithandayo yeBrains, iiNtetho zeXesha lesi-2
URose McIver we 'iZombie' Uxoxa ngeFvourite yakhe ayithandayo yeBrains, iiNtetho zeXesha lesi-2
URose McIver njengo-Olivia Moore Zombie 'S isizini yokuqala ye-premiere. (Ifoto: Diyah Pera / I-CW)
Ndifumene umnxeba ovela kuRose McIver ingekapheli imizuzu emihlanu emva kokubukela inkulumbuso yesithandathu yexesha Abahamba befile. Ndimele ukuthi, emva kweyure enesiqingatha Uhamba efile 'I-dreary, uphawu olungenathemba lokubaliswa kwamabali e-zombie, UNks McIver - isandi sakhe saseNew Zealand esityebileyo, isimo sakhe sengqondo ngokungathandabuzekiyo chipper - yayiyinto yokuphefumla umoya omtsha.
Kunokuthethwa okufanayo, ngokwenene Zombie, ukusuka UVeronica Mars umdali uRob Thomas kwaye wahlengahlengiswa kwincwadi ye-Vertigo comic . Embindini wexesha le-zombie boom ngaphandle kokunqongophala kwegazi, amathumbu, kunye ne-gore, i-CW's zombie series series yaqala ukubonwa ebutsheni balo nyaka, ibonelela ababukeli ngokukhanya okuthe kratya ngakumbi kubuhle obungafunekiyo. UNks McIver ubalasele njengoLiv Moore, oshiya umsebenzi wakhe njengomsebenzi wezonyango ukuze asebenze kwindawo yokugcina izidumbu emva kokufumana intsholongwane ye-zombie. Uyazi, ukusondela kwiingqondo. Eyityayo. Ngethamsanqa, uLiv uzuza iinkumbulo kunye neempawu zabanini beengqondo, ulwazi alusebenzisayo ukunceda ukusombulula ulwaphulo-mthetho.
Ndiyazi, ndiyazi, sisiphi isisekelo. Kodwa umboniso ufumene ukuzithemba kumdlalo webhola ongaqhelekanga ngaphandle kwesango. Ikwafumene abaphulaphuli. Zombie 'Ixesha lesibini liqala ngokuhlwanje, ke ndiye ndancokola noNks McIver malunga noko ndikulindeleyo, uLiv edibanisa uDavid Anders' uBlaine kwaye, okona kubaluleke kakhulu, ukuba ukhona umntu okwazileyo ukwenza ezo ngqondo zingcamle ngcono.
Ndigqibile Uhamba efile, Ndiyaxolisa ke ukuba ndiyayiphazamisa i-lore yam ye-zombie kwaphela.
Ahh, singabalandeli abakhulu Abahamba befile. Olu luhlobo lomboniso ohlukileyo we-zombie, ndingathi. Bafumene into engaphefumlelwanga phantsi.
Ukuba Uhamba efile Ngaba iApocalypse, iphi Zombie ulunge ngoku kwisikimu esikhulu se-zombie fandom?
Singumboniso we zombie ozaziyo! Zombie Ngokwenene yamkela iZombi njengezinto zenkcubeko. U-Liv wenza uphando ngokubukela iifilimu ezindala, ezimnyama-mhlophe zombie. Ndicinga ukuba izinto ezibonakalisayo kumboniso wethu ziyibeka bucala, kwaye siyakwazi ukujongana nokuzihlekisa.
Ke siyifumana phi i-Liv ekuqaleni kweSizini 2?
Simfumana ngeendlela ezininzi. Ukuziva yedwa kakhulu, kwaye ndiziva ndikhathazekile kukuba, ngaphandle kwesiphoso sakhe, uninzi lwabantu abasondele kuye ebomini bakhe bamtyhalele kude. Usematyeni kubudlelwane bakhe noMajor, uPeyton ubalekile kuba nje akakwazi ukumelana noLiv ekubeni eyi-zombie. UClive noRavi ngokwenene ngabo bodwa abanokunamathela kuye, kwaye uClive akazi nokuba uyiZombie.
URob Thomas uthe kukho ithuba elihle lokuba uLiv noBlaine basebenze kunye kwisizini 2. Nantoni na onokundixelela ngayo?
Isizini ephelileyo, uDavid Anders kwaye besikhathazekile kangangokuba khange sisebenze kunye ngakumbi, kuba ngokwendalo amabali ethu ebali agcinwa kubude beengalo. Kodwa sinento enkulu ekwi-screen chemistry. Iya kuba kukuxhathisa okunamandla phakathi kwaba bantu babini, kodwa ukuqonda okwabelwanayo kuba bobabini badlule kwinto ekungekho mntu unayo. Kumnandi kakhulu ukubakho, kuninzi okuhlekisayo ekuhloleni olo lwalamano lutsha banalo ekusebenzeni kunye. Kwangelo xesha ubulele abantu abathandwa kakhulu nguLiv, nto leyo ingabalulekanga lula. Kuyi-shitft eguqukayo, kwaye inomdla.
Zeziphi iintlobo zobuchopho esizijongayo kwisizini 2? Ndicinga ukuba uRob Thomas wakhankanya indoda endala ingqondo?
Ewe, sikhatywa yingqondo yendoda endala enenqala, eyayingoyena mntu ndimthandayo ndimthandayo. Ungumntu onesimilo esikhulu. Isebenza kakuhle ebalini kodwa kunzima ukudlala umlinganiswa endingenakufumana nto ndiyithandayo ngabo. Ndiyamthanda uLiv, kwaye ndiyayithanda imiba emininzi yobuchopho ayityileyo, kodwa lo mlinganiswa ungumntu oqaqadekileyo, onobuhlanga no-Archy Bunker wohlobo lomntu omdala. Ayisiyo uphawu oluthandekayo lokuntywila kulo.
Yiloo nto ke esiqala ngayo, emva koko ndicinga ukuba ndivumelekile ukukuxelela isibini esilandelayo - inkwenkwana engathandabuzekiyo, 'umfazi wasekhaya wokwenyani,' kunye nemvumi yelizwe. Ezo ziluhlobo lwenye ukuya kolwesine, kwaye luluhlu olulunge ngokwenene. Yinto esidlale ngayo kancinane ngeli xesha lonyaka - indlela ubuchwephesha obuchaphazela ngayo ubuntu bukaLiv.
Ndicinga ukuba uza kucula imvumi yelizwe.
Ndihlala ndicula, ke kumnandi ukufumana ithuba lokubonisa loo nto incinci kumdlalo kunye nalo mlinganiswa. Olu luhlobo lwento endiyithandayo kakhulu ngalo mboniso, ukuba ezi zinto ndizithandayo ndizithathileyo kule minyaka idlulileyo zifumana ubomi obutsha kwiscreen ngalo mlinganiswa. Kudala ndityhala [ababhali] kwizinto endizenzileyo… bendidla ngokuloba iskate, okanye ndenze iballet. Ndiyakonwabela ukucula, ndicinga ukuba yeyona nto ibhencayo esinokuyenza.
Ke ngalo lonke ixesha lonyaka ezincwadini kwaye lisiya kwixesha lesibini, ngaba bayifumene indlela yokwenza ubuchopho bunambithe ngcono kuwe?
Ewe, abakho Kulungile [ehleka] . Uninzi lwe-gelatin, ke inene yile nto bayidibanisa ukuyifihla. Nditya nje, kwiveki ephelileyo, yayizezincinci ezincinci ze-gelatin ezinamakhowa, kunye nesonka esineesonka kunye nazo zonke iintlobo zezinto. Kwakumnandi ngokwenene! Leyo yayiyeyona nguqulelo ibalaseleyo. Kwakuyixesha lokuqala ndakhe ndatya ubuchopho kwiseti kwaye ndinje 'Heyi, ayonto imbi le.' Kwiveki engaphambi kokuba senze isityu esothusayo. Kwakungathi yingqondo ixutywe kunye nepakethi yesosi yesityu, olu hlobo lutyebileyo lwegravy emdaka. Yayintle loo nto.
Ixesha lesibini leZombie liqala ngo-Okthobha u-6 ngentsimbi yesithoba kwi-CW.
Ukulinganisela ukholo kunye nomculo akukho lula-yiyo loo nto isiTshintsho somdlalo weKhondo
UMeghan Markle wenza iCameo kwiTrailer yePrince Harry kunye neOprah's New Docuseries
Yinto elungileyo iTamron Hall IneWardrobe yoMboniso weNtetho yasemini
Nantsi indlela eziNinzi ngayo iiNkwenkwezi ze'Avengers: Endgame '
ukuba abantu beziingelosi bacaphule
Best 100 free ukuthandana isayithi
umphathi we-American war box box office office
ukuthenga phi umbona weelekese unyaka wonke
uyifumana njani le nto uyifunayo kwi-narcissist